Diyaarad Lacag Sidda oo Muqdisho lagu Qabtay | Baydhabo Online
Diyaarad Lacag Sidda oo Muqdisho lagu Qabtay
Wararka ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in hay’adaha amniga Soomaaliya ay qabteen boorsooyin la aamisan yahay inay ku jiraan lacago ay sidday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta.
Saraakiisha garoonka ayaa u xaqiijiyay VOA-da in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin, kaddib markii ay ka shakiyeen. Ciidanka ayaa la sheegay in ay dalbadeen in la baaro balse howlwadeennada safaaraddda Imaaraatka ee Muqdisho ayaa diiday in la furo boorsooyinka.
Diblamaasiyiinta Safaaradda Imaaraatka ee Muqdisho ayaa la sheegayaa in ciidanka amniga Soomaaliya ee lacagtan qabtay ay u sheegeen in lacagtaa loogu talagalay mushaharka ciidamada Soomaalida ee uu Imaaraatku tababaro.
Hase yeeshee Ciidamada amniga ee dowladda ayaa iyagu lacagta uga shakiyay in loo wado dhinacyada dowladda ka soo horjeeda.
Warar ay VOA-da heshay ayaa sheegaya in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu sheegay 9 malyuun iyo 600 oo kun ay ciidamada NISA la wareegeen, waxaana la sheegay inay taallo xafiiska NISA ee garoonka diyaaradaha.
Xiriirka dowladda Soomaliya iyo Imaaraatka ayaa aad u liitay wixi ka danbeeyay go,aankii baarlamaanka federaalka uu Shirkada DP world uga mamnuucay dhamaan heshiisyadi ay Soomaaliya ku gashay.